Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. ५० वर्षीय अक्षयकुमारबारे रोचक तथ्य – Emountain TV
५० वर्षीय अक्षयकुमारबारे रोचक तथ्य
अभिनेता अक्षयकुमार शनिबार (९ सेप्टेम्बर)मा ५० वर्ष पुगेका छन् । एक्सन, लभ, सेन्टिमेन्ट्स तथा कमेडी, जुनसुकै भूमिकामा पनि उत्तिकै जम्ने गरेका अक्षयका अधिकांश फिल्म सफल छन् । पछिल्लो समय उनी अभिनीत ‘ट्वाइटेलः एक प्रेमकथा’ पनि सुपरहिट भयो । अक्षय ५१ वर्षमा लागेको अवसरमा भारतीय अनलाइनले उनीबारे विविध रोचक तथ्य प्रस्तुत गरेका छन् ।
सन् १९६७ सेप्टेम्बर ९ मा जन्मिएका अक्षयकुमारको खास नाम राजीव हरिओम भाटिया हो । दिल्लीको चाँदनी चोकमा बाल्यकाल बिताएका अक्षयले मुम्बईको डन बास्को स्कुल र गुरु नानक खालसा कलेजमा अध्ययन गरेका हुन् ।
मार्सल आट्र्समा गहिरो रुचि भएकाले अक्षयकुमार मार्सल आट्र्सको ट्रेनिङ गर्न बैँकक गएका थिए । त्यतिवेला गुजारा चलाउन खाली समयमा उनले त्यहाँ सेफ र वेटरको काम पनि गरेका थिए ।
बैंककमा मार्सल आर्टको कोर्स पूरा गरेर पछि मुम्बई फर्किएर उनले मार्सल आर्ट सिकाउन थाले । त्यही क्रममा उनका एकजना चेला, जो फोटोग्राफर पनि हुन्, उनले तपार्इं हेन्डसम हुनुहुन्छ, मोडलिङममा लाग्दा राम्रो हुन्छ भनेर सुझाब दिएका थिए ।
चेलाको सुझाब अक्षयले मनन गरे । त्यसपछि मोडलिङमा लाग्ने बाटो खोजे । सोचेको केही दिनमै अक्षयले मोडलिङ गर्ने अवसर पाए । उनले दुई दिन सुटिङ गर्नुपर्‍यो । त्यहाँ उनले यति धेरै पारिश्रमिक पाए कि जुन उनले एक महिना मार्सल आर्ट प्रशिक्षण दिँदा पनि पाउँदैनथे । त्यसपछि उनले मोडलिङ, फिल्ममै करिअर बनाउने निधो गरे ।
त्यसपछि अक्षय मोडलिङका साथै फिल्म निर्माताको घरघरमा पुग्न थाले । फिल्ममा अभिनय गर्ने अवसर खोज्न थाले । उनलाई एउटा विज्ञापनको सुटिङका लागि बैँग्लोर जानुपर्ने थियो । कसो–कसो उनको फ्लाइट मिस भयो । त्यसपछि उनी खाली भए । त्यो समयको उपयोग गर्दै उनी एकजना निर्माताकोमा काम माग्न गए । भाग्यको खेल, उनले निर्माता प्रमोद चक्रवर्तीको ‘दिदार’ फिल्ममा हिरो बन्ने मौका पाए ।
अक्षयले सन् १९८७ मा महेश भट्टको आज फिल्ममा मार्सल आर्ट प्रशिक्षकको निकै छोटो भूमिका निर्वाह गर्न पाएका थिए । फिल्ममा उनको भूमिका जम्मा सात सेकेन्डको थियो ।
राजेश खन्नाले ‘जय शिव शंकर’ नामक फिल्म निर्माण गर्न लागेको र त्यो फिल्ममा उनले नयाँ हिरो खोजिरहेको अक्षयकुमारले थाहा पाए । त्यसपछि उनी राजेश खन्नालाई भेट्न उनको अफिसमा गए । अक्षयले खन्नालाई दुई–तीन घण्टा कुरे । तर, खन्ना अक्षयलाई नभेटिकनै त्यहाँबाट बाहिरिए । उनै अक्षयले पछि, तिनै राजेश खन्नाकी छोरी ट्विंकल खन्नासँग बिहे गरे । त्यो कुरा सम्झिँदा अक्षयलाई पनि अचम्म लाग्छ रे ।
अक्षय प्रमुख हिरो भएको फिल्म सन् १९९१ को ‘सौगन्ध’ हो ।
जब अक्षयलाई बलिउडले पत्याउन थाल्यो, त्यसपछि उनको हातमा लगालग फिल्म पर्दै गए । सन् १९९४ मा उनका ‘ऐलान’, ‘ए दिल्लगी’, ‘जय किसन’, ‘मोहोरा’, ‘मै खिलाडी तु अनाडी’, ‘एक्के पे एक्का’, ‘अमानत’, ‘सुहाग’, ‘जख्मी’, ‘दिल’, ‘जालिम’ र ‘हम है बेमिसाल’ गरी ११ वटा फिल्म रिलिज भएका थिए ।
युवतीको मामलामा पनि अक्षय निकै अघि छ । उनले पूजा बत्रा, रविना टन्डन र शिल्पा शेट्टीसँग उनले जमेर रोमान्स गरे । तर, बिहे भने उनले ट्विंकल खन्नासँग गरे ।
ट्विंकलसँग बिहेपछि अक्षयको नाम प्रियंका चोपडासँग जोडियो । उनीहरूले केही फिल्ममा सँगै अभिनय पनि गरे । प्रियंकासँगको अफेयरका कारण ट्विंकल निकै तनावग्रस्त भइन् । अन्ततः, उनले पति अक्षयलाई उप्रान्त प्रियंकासँग काम नगर्न वाचा गराइन् । अक्षयले पत्नीसँगको त्यो वाचा अहिलेसम्म तोडेका छैनन् ।
अक्षयका आठवटा फिल्ममा ‘खिलाडी’ शब्द आएको छ, त्यसकारण उनलाई ‘खिलाडीकुमार’समेत भन्ने गरिएको छ । खिलाडी नाम जोडिएका उनका अधिकांश फिल्म हिट छन् । फिल्म हुन्– ‘खिलाडी’, ‘मै खिलाडी तु अनाडी’, ‘सबसे बडा खिलाडी’, ‘खिलाडियाँेका खिलाडी’, ‘मि एन्ड मिसेस खिलाडी’, ‘इन्टरनेसनल खिलाडी’, ‘खिलाडी ४२०’ र ‘खिलाडी ७८६’ ।
खिलाडियाँेका खिलाडी फिल्ममा अक्षयको नाममा एउटा गीत बनाइएको छ । गीतको बोल छ– ना हम अमिताभ, ना दिलीपकुमार, ना किसी हिरोको बच्चे, हम हे सीधेसाधे अक्षय, अक्षय । गीतमा विना कुनै गडफादर या कुनै नातेदार अक्षयले बलिउडमा आफ्नो स्थान बनाएको भाव उल्लेख छ ।
सन् २००० मा बनेको कमेडी फिल्म ‘हेराफेरि’ अक्षयको करिअरको टर्निङ प्वाइन्ट सावित भयो । त्यतिवेला एक्सन तथा फर्मुला फिल्म दर्शकले मन पराउने क्रम घटेको थियो । त्यही वेलामा अक्षय कमेडी भूमिकामा प्रस्तुत भए । सो फिल्मबाट अक्षयले आफूलाई कमेडी पनि राम्रो गर्ने हिरोका रूपमा प्रमाणित गरे । त्यसपछि उनी अहिलेसम्म पनि कमेडी फिल्ममै जमिरहेका छन् ।
अक्षय निकै अनुशासित जीवन जिउँछन् । उनी राति साढे ९ बजे सुतिसक्छन् भने बिहान ४ बजे उठिसक्छन् । यदि कुनै दिन राति सुत्न ढिला भयो भने पनि उनी बिहान ४ बजे नै उठ्छन् । त्यसकारण, अक्षय फिल्मी पार्टीदेखि टाढै बस्ने गरेका छन् ।
बलिउडमा अधिकांश फिल्मको सुटिङ दिउँसोदेखि अबेर रातिसम्म गरिन्छ । तर, अक्षयको फिल्म खिच्ने काम भने बिहानैदेखि भएर साँझ नौ बजेसम्म प्याकअप भइसक्छ ।
अक्षय वर्षमा दुईचोटि परिवारका साथ घुम्न निस्किन्छन् । उनी प्रायः घुम्न यस्ता देशमा जान्छन्, कि त्यो देशको बारेमा कमैलाई मात्र थाहा होस् । उनी बाटोछेउको होटेलमा खाना खान मन पराउँछन् ।
अक्षयकी छोरीको नाम नितारा हो । नितारा बाबु अक्षयलाई अक्की बेटा भनेर बोलाउँछिन् । अक्षयका छोरा अराजका बारेमा उनका हजुरबुबा राजेश खन्नाले भविष्यवाणी गरेका छन् कि, उनी बलिउडको सुपरस्टार हुनेछन् ।
अक्षय आफ्ना छोराछोरीलाई मिडियाबाट टाढै राख्ने गरेका छन् । यसबाट उनीहरूको बाल्यकाल सहज ढ्रंगले व्यतित हुने बुझाइ अक्षयको छ ।
नयाँ पत्रिकाले खबर लेखेको छ ।
रुँदैमा फिल्म चल्छ ?
‘शुभलभ’ मा हरिहर र कृष्टिन